जगेडा « Clickmandu
कुन रुटमा कतिले बढ्यो सार्वजनिक यातायातको भाडा ?
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले २८ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको हो । यात्रुवाहक सवारी २८ प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी २०
सरकारी निवास बालुवाटार सरे प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौं । कर्णाली करिडोर अन्तर्गतको खुलालु–लैफु–सलीसल्ला सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको छ । निर्माण शुरु गरिएको करिब ७ वर्षपछि खुलालु–लैफु–सलीसल्ला सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपाली सेनाले ११२.७५
अधिकांश बैंकले घटाए कर्जाको ब्याजदर, त्रैमासिक रुपमा लागू हुने बेसरेट बढ्ला ?
काठमाडौं । अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा ब्याजदर घटाएका छन् । गत चैतमा कायम आधारदर (बेसरेट) घटाएर बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाएका हुन् । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये २० वटाले साउन
साढे ३ वर्षे ओली सरकारको ‘म्याक्रो इकोनोमिक’ चिरफारः ऋण दोब्बरले बढ्यो, विकासमा कामभन्दा गफ
संसद छलेर बजेट ल्याउनु सरकारको जालझेल र धोखाधडी: सर्वोच्चको फैसला
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागी ल्याएको बजेट संवैधानिक व्यवस्थाविपरित एवम् जालझेल र धोखाधडी गर्ने उद्देश्यले आएको सर्वोच्च आदलतले ठहर गरेको छ । संसद पुनस्र्थापना सम्बन्धी सर्वोच्चको
काठमाडौं महानगरपालिकाको १५ ऐनहरुको संग्रह सार्वजनिक
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म जारी गरेका १५ वटा ऐनहरुको संग्रह ‘काठमाडौं महानगरपालिका ऐन संग्रह २०७८’ सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय सभा गृहमा शुक्रबार सम्पन्न महानगरको नवौं अधिवेसनको छैटौं बैठकमा
४५ स्थानीय तहमा प्रशासकीय भवन बनाउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा साढे ४४ करोड थप निकासा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सकिन २ हप्ताभन्दा कम समय मात्र बाँकी रहँदा सरकारले अनावश्यक बजेट खर्च र थप निकासाका लागि धमाधम स्वीकृत दिन थालेको छ । सरकारले आर्थिक
कोषबारे आन्दोलन गर्नेहरूको लागि जिफन्टको प्रश्नः अहिले किन आन्दोलन गरेको ?
काठमाडौं ।अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुनेभन्दै बैंकका कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसबारे नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले अहिले किन आन्दोलन गरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । जिफन्टले
विपक्षी गठबन्धनको आग्रहः राहत र उद्धारमा जुटौं
काठमाडौं । विपक्षी दलहरुको गठबन्धनले बाढी, पहिरो र डुबानबाट जनताको सुरक्षा गर्न, पीडित जनता र विस्थापितका लागि तत्काल आवास, खाद्यान्न, मृतकका परिवारलाई सहयोग, घाइतेको उपचारलगायत उद्धार तथा राहतका काम प्रभावकारीरूपमा